इजलासमा अधिवक्ताका न्यायाधीशलाई प्रश्न- श्रीमान्‌को इन्टेग्रिटीमा प्रश्न छैन तर, पब्लिकले के भन्छ ? – ThePressNepal
कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप १ लाख भन्दा बढिले लगाए
कम्युनिष्ट आन्दोलनको शक्ति केन्द्रित हुँदैछ: नयाँ युगको शुरुआत केही दिनमै शुरु
६ महिना देखि ५ बर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औषधि र भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउदै
लगातार ३ खेलमा जित्दै बैङलोर् आइपिएलको शिर्ष स्थानमा
मैले जानीजानी देश र जनताको हितविपरीत कुनै पनि काम गरेको छैन-सभामुख सापकोटा
अपराध तथा दुर्घटना
इजलासमा अधिवक्ताका न्यायाधीशलाई प्रश्न- श्रीमान्‌को इन्टेग्रिटीमा प्रश्न छैन तर, पब्लिकले के भन्छ ?
द प्रेस नेपाल संवाददाता
काठमाडौं, पुस २२ । संसद विघटन पश्चात संसद पुन स्थापना हुने वा नयाँ निर्वाचन हुने सर्वोच्च अदालतको हातमा छ। तेसैलै सर्वोच्च तिर धेरैका आखाँ छन भने अदाततले जनताका आवाज सुन्नु पर्ने भन्दै सडकमा दवाव मुलक कार्यक्रम पनि दिनहु भै रहेका छन् ।
यसै क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरुमाथि निरन्तर सुनुवाईको क्रममा चिया ब्रेकपछि पहिलो बहस गर्दै थापाले न्यायाधीश कार्की विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकार रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा उनको सहभागितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने– हरिकृष्णजी विगतमा केपी ओलीको सल्लाहकार हो । तपाईको कमन सेन्सले के भन्छ ? पब्लिकले के भन्लान् ? हामी अदालतको आदेश त मानौंला, यसबारे इजलासले विवेक प्रयोग गरोस् । हरिकृष्ण श्रीमानलाई के लाग्छ ? बस्नुस् वा छाड्नुस् म भन्दिनँ । कार्की ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा महान्यायाधिवक्ता थिए । थापाले हिजोको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आजका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र न्यायाधीश कार्कीमा के फरक छ भनी प्रश्न उठाएका हुन् । बार एशोसियनका पूर्व अध्यक्ष थापाले कानुनविदले प्रश्न उठाइसकेपछि अदालतले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नहेर्ने भएका छन् । इजलासमा कार्कीका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रश्न उठाएका थिए । केहीबेर सो विषयमा बहसपछि न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘‘इजलासमा बहसका क्रममा प्रश्न उठ्यो । म हेर्दिनँ ।’’ थापाले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधिक्ता रहिसकेको भन्दै उनैविरुद्धको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
कार्की केपी ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता रहिसकेको, प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाऊमा उनीसँगै पहिला एउटै फर्ममा काम गरेका अग्नी खरेल महान्यायाधिवक्ताका रूपमा बहसमा आएको भन्दै कार्की इजलासमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै थापाले प्रश्न उठाएका थिए । उनले न्यायाधीश कार्कीलाई इजलासमा बस्ने विषयमा तपाईंको कमन सेन्सले के भन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘‘श्रीमान्‌को इन्टेग्रिटीमा प्रश्न छैन । तर, पब्लिकले के भन्छन् ?’’ थापाले भने ।
थापाले कार्कीले सुनुवाइको सिद्धान्तअनुसार पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुद्दा हेर्दिनँ भन्नुपर्ने पनि बताए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कार्कीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नलाई ढिसमिस गर्न नमिल्ने बताए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूलाई पनि ओलीले नियुक्त गरेको भन्छन् नि ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘‘यही कुरा प्रधानन्यायाधीशमा पनि लागु हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा स्वार्थ बाझिँदा पनि बस्‍न मिल्छ । केपी ओलीले नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीश भनेका छन् पत्रपत्रिकाले,’’ उनले भने ।
कार्कीका बारेमा प्रश्न उठेको भन्दै उनले इजलासले निकास दिने पनि बताए । थापाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई नियुक्त गर्नु र सल्लाहकार बस्नुमा फरक रहेको जवाफ दिएका थिए । अर्को सुनुवाइ बुधबार हुनेछ ।
Tags: न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास
Previous साउनदेखि प्रोत्साहन भत्ता नपाएको भन्दै मन्त्रीलाई खेलाडीको ध्यानाकर्षण
Next आजको राशिफल, आजको दिन तपाईंका लागि कस्तो रहला ?
थापाले लिए पुन: गृहमन्त्रीको शपथ